ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ 2020 11.11ပွဲတော်ကြီးကို Shop မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ - Shop
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ 2020 11.11ပွဲတော်ကြီးကို Shop မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ0725
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေ၊ သီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ Shop Anniversary ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ 2020 Shop Anniversary ပွဲတော်ကြီးနဲ့ 9.9 Super Sale ပွဲတော်ကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နောက်ထပ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်တစ်ခုဟာမကြာမှီရောက်ရှိလို့လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး Online Shopping ပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ 12.12 sale 2020 ပွဲတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ နို၀င်ဘာလမှာ Shop ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Shop 11.11 deal 2020 ပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Single day အဖြစ်လူသိများကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်လဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး online shopping ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Alibaba ဟာအွန်လိုင်းမှ အကြီးစားအွန်လိုင်းရောင်းချမှုကို 11.11 အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ၁၁.၁၁ အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို နိုဝင်ဘာလ ၁ မှ ၁၀ ရက်အတွင်းကို အကြိုအနေနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၁ မှ ၁၅ ရက်နေ့တွေမှာတော့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံး ၁၁.၁၁ အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို shop.com.mm မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
11.11 အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကျဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာတော့ အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူပဲ လျှော့စျေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‌ဒီ 2020 ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး 11.11 အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး မှာဆိုရင်တော့ ကုန်စ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၅၀၀၀ကျော်မှ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ကျော်ကို အထူးလျှော့စျေးတွေနဲ့ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက် လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တစ်နေရာထဲမှာရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ရဲ့ အိမ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စားသောက်ကုန်တွေဝယ်စုထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် 11.11 အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဟာ သင့်အတွက် ဝယ်ယူဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပွဲတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ 11.11 အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဟာ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာ ကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ပွဲတော်ကြီးပါပဲ။
Shop.com.mmရဲ့ 2020 11.11 စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝယ်ယူသူအားလုံးကိုပါဝင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…
Shop MM ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး e-commerce ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူများကို သန်းပေါင်းများစွာသောပစ္စည်းတွေကိုပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲပြီး ရောင်းချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်များအပြင် ပရိဘောဂ၊ ဖက်ရှင်၊ အလှအပ၊ မိုဘိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဂိမ်းစက်များအပြင် အခြားကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကိုလဲစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။ Shop.com.mm ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ Alibaba မှ အပြီးတိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၀ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအား virtual marketplace သို့အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Shop MM သည် ဝယ်ယူသူအားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်သောစျေးနှုန်းများနှင့် အထူးလျှော့စျေးများကိုလစဉ်လတိုင်းရရှိစေရန် ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အစဉ်အမြဲပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။
Shop bring the biggest online shopping festival in the world 11.11 sale 2020
Shop MM is the largest e-commerce website in Myanmar that offers millions of products of assorted categories to its customers online.From electronics, furniture, fashion, beauty, mobile accessories, gaming consoles, groceries, you name it! Acquired by Alibaba in 2018, it has grown to provide buyers and sellers in Myanmar easy access toavirtual marketplace. Shop MM makesapromise of quality service to all its customers where you can also expect to get unbelievable rates, discounts, and sales every month. You can also avail of secure payment options, timely delivery, and easy return/exchange. Shop MM is all about making online shoppingalot easier and something to look forward to!
Previous ArticleGet your buying guides for 12.12 The World’s Biggest Sale 2020Next Article၂၀၂၀ 12.12 နှစ်ကုန်အထူးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး Shop မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။